HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Asamey Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Basque Bassa (Cameroun) Batak (Toba) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Bosniaka Boulou Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cinghalais Corsican Dangme Danoà Digor Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fante Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Féroïen Ga Galicienne Galoà Garifuna Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kabuverdianu Kabyle Kachin Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabo) Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Masedonianina Mazateky (Huautla) Mende Mingrelian Mixe (Afovoany) Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Sirilika) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotonga Romanianina Rosianina Rômania (Macédoine) Sirilika Rômania (Romania) Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Somali Soundanais Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tankarana Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshwa Tsonga Turkmène Twi Tzotzil Télougou Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Wallis Xhosa Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Éwé
Hevi-diso ananan’ny olona
Hevi-diso: Tsy mino ny Vavolombelon’i Jehovah hoe afaka manasitrana ny fanafody na ny dokotera.
Ny marina: Te hahazo ny fitsaboana tsara indrindra izahay sy ny fianakavianay. Manatona dokotera izahay rehefa marary. Dokotera mahay mitsabo sy manao fandidiana tsy ampiasana ra no tadiavinay. Faly izahay fa mandroso be izao ny fitsaboana, ka tsy ny Vavolombelon’i Jehovah irery intsony no mandray soa amin’ny fitsaboana tsy ampiasana ra fa ny olon-kafa koa. Afaka misoroka ny voka-dratsin’ny fampidiran-dra izao ny marary any amin’ny firenena maro. Mety hitondra otrikaretina mantsy ny ra. Mety tsy hiasa tsara intsony koa ny hery fanefitra, ary mety hisy fahadisoana ataon’ny mpitsabo eo amin’ny resaka sokajin-dra na ny toy izany.
Hevi-diso: Mino ny Vavolombelon’i Jehovah fa mila manana finoana fotsiny ny marary dia ho sitrana ny aretiny.
Ny marina: Tsy manao fanasitranana amin’ny alalan’ny finoana izahay.
Hevi-diso: Lafo be ny fitsaboana tsy ampiasana ra.
Ny marina: Mora kokoa ny fitsaboana tsy ampiasana ra.
Hevi-diso: Maro ny Vavolombelon’i Jehovah maty isan-taona, satria tsy nanaiky hampidiran-dra. Ankizy ny sasany amin’izy ireo.
Ny marina: Tsy mitombina mihitsy izany. Maro ny dokotera mpandidy efa zatra tsy mampiasa ra rehefa manao fandidiana sarotra, ohatra hoe mandidy fo, taolan-damosina, ary mamindra taova. * Tafavoaka tsara toy ny olona ampidiran-dra, na sitrana haingana kokoa aza, ireo marary tsy ampidiran-dra, anisan’izany ny ankizy. Tsy misy afaka manizingizina hoe ho faty ny olona iray rehefa tsy manaiky hampidiran-dra, na ho velona izy rehefa manaiky an’izany.
Antony ara-pivavahana no mahatonga azy ireo tsy hanaiky hampidiran-dra, fa tsy antony ara-pitsaboana. Na ny Testamenta Taloha na ny Testamenta Vaovao dia samy milaza fa tokony hofadina ny ra. (Genesisy 9:4; Levitikosy 17:10; Deoteronomia 12:23; Asan’ny Apostoly 15:28, 29) Aina koa ny ra amin’Andriamanitra. (Levitikosy 17:14) Tsy manaiky hampidiran-dra àry izahay, satria te hankatò an’Andriamanitra sady manaiky fa izy no Mpanome aina.
Niova hevitra ny mpitsabo
Efa vitan’ny mpitsabo àry izao ny manao fandidiana sarotra nefa tsy mampiasa ra
Taloha ny mpitsabo nihevitra hoe mety hidiran-doza na toy ny hoe mamono tena mihitsy aza, ny olona tsy manaiky hampidiran-dra fa mitady fitsaboana hafa. Niova anefa izy ireo, tato ho ato. Izao, ohatra, no voalazan’ny gazety iray momba ny fitsaboana, tamin’ny 2004: “Maro amin’ireo teknika nampiasaina hitsaboana ny Vavolombelon’i Jehovah no hanjary ho fitsaboana mahazatra, amin’ireo taona ho avy.” Milaza koa ny lahatsoratra iray tao amin’ny gazetiboky Fo sy Havokavoka ary Fikorianan’ny Ra (anglisy), tamin’ny 2010, fa “tsy rehefa mandidy VJ [na Vavolombelon’i Jehovah] ihany ny dokotera no ‘tsy hampiasa ra’ fa tokony ho izany foana no ho fahazarany rehefa mandidy.”
Dokotera an’arivony izao eran-tany no tsy mampiditra ra rehefa manao fandidiana sarotra. Misy teknika ampiasainy mba ho kely ny ra very. Efa ampiasaina any amin’ny tany mahantra ireny fitsaboana solon’ny fampidiran-dra ireny, ary na ny olona tsy Vavolombelon’i Jehovah aza mitaky azy ireny.
^ feh. 10 Iangavio ny Vavolombelon’i Jehovah mba hampiseho aminao an’ilay video hoe Solon’ny Fampidiran-dra: Fanadihadiana Samihafa.
Hizara Hizara Nahoana ny Vavolombelon’i Jehovah no Tsy Manaiky Hampidiran-dra?